Hagaha ugu fiican iyo xeeladaha - Gambling Papa
1 Waa maxay roulette?
2 Sida loo ciyaaro roulette?
3 Maxay yihiin jaantusyada istiraatiijiyadda roulette?
4 Tilmaamaha Roulette ee bilowga
5 Noocyada roulette
6 Xeeladaha sharadka Roulette
7 Sidee loogu guuleystaa roulette?
8 Tilmaamaha Roulette iyo tabaha
Dhamaadka maalinta, tagista casino waa wax ka badan madadaalo inta badan. Waxay u egtahay inay tahay goob ay kula dhaqmaan asxaabtooda iyagoo ku raaxeysanaya waxqabad caafimaad leh.
Ciyaar caan ah oo caan ah oo laga heli karo adduunka oo dhan:
Dhigista wax yar oo khamaar ah sabuuradda waxaa loo arki karaa inay tahay wax aan waxba galabsan. Ka sokow, yaa looga shaqeeyaa inbadan oo kubbado miis ah?
Si hufan ciyaar jaanis ah maadaama ay kuxirantahay halka ay kubaddu ku dhacdo:
Hagaag, waxay kuxirantahay aragtida aad qaadatay, tani waxay noqon kartaa lo ‘lacag ah oo sugeysa in la ogaado. Markaad barato sida loo ciyaaro istaraatiijiyad ahaan, waxaad ka socon doontaa kaashka adigoo wata lacag ka badan intaad qaadi karto.
Waa maxay roulette?
Roulette wuxuu ka mid yahay cayaaraha ugu da’da weyn ee lagu ciyaaro casinos. Asalkiisa saxda ah lama garanayo. Si kastaba ha noqotee, taariikhyahannada badankood waxay aaminsan yihiin in laga sameeyay meel ka mid ah Faransiiska. Ilaa dhowaan, dadka badankood dan kama lahayn asalkiisa. Si kastaba ha noqotee, markay bulshadu horumar gaarto, xiisaha aan u qabno hidaha ayaa sii kordhaya oo keliya.
Giraangir yar oo wareegaya miiska dhexda:
Xitaa xilliyadii la soo dhaafay, gelinta giraangirta bartamaha miiska ma ahayn fikrad cusub. Dadku waxay isticmaaleen giraangiraha muddo dheer. Hase yeeshe, waqti uun intii lagu jiray qarniyadii dhexe, qof baa lahaa fikrad dhalaalaya oo ah abuuritaanka miiska casriga casriga ah. Tan iyo waagaas, fikradu waxay ku sii faaftay geesaha kaladuwan ee adduunka.
Hawl wadeenku wuxuu kubad ku tuurayaa giraangirta:
Waagii hore, dadku way isweydaarsan jireen iyagoo kubbada ku tuuraya giraangirta. Marka la barbardhigo dhaqamadaas, cayaarahayaga casino ayaa wax yar ka xannibaya. Markaad ciyaareyso iyaga, kaliya howl wadeenka ayaa gacanta ku haya kubbada inta ciyaarta socoto. Waxaan u maleynayaa inay kaa hor istaagi karto aasaaska.
Kubaddu way wareegsan tahay ilaa ay ka lumiso xawaareheeda:
Ka dib marka hawlwadeenku sii daayo kubbadda, waxaa lagu sii deynayaa shaagagga wareegaya. Halkaa marka ay marayso, xawaaraha kubada ayaa horay u sii wadi doona ilaa ay gaabinayso. Mararka qaarkood, waxay umuuqan kartaa in kubaddu ay si wareeg ah u wareejin doonto giraangirta. Si kastaba ha noqotee, markii waqti ku filan la maro, waxay had iyo jeer heshaa meel jilicsan oo la dego.
Halkaa markay marayso, waxay ku dhacaysaa leexasho yar oo dhinaca giraangirta ah:
Markay ugu dambayn gaarto barta nasashada, sharadka mar dambe looma oggola in la dhigo. Illaa iyo xilligaas, ciyaartoydu way sharaddhihi karaan inkasta oo ay kubaddu rogrogayso. Xaqiiqdii, munaasabadaha qaarkood, sharadka ugu fiican ee ciyaarta ayaa xilligan dhaca. Si kastaba ha noqotee, hadda markii la dejiyay, hawlwadeenku wuxuu bixin doonaa xukun. Qof kasta oo ku lug leh, erayga hawlwadeenku waa kii ugu dambeeyay.
Waxay kuxirantahay halka uu leexsanyahay meesha, guusha waxaa lagu dhawaaqi doonaa:
Aynu u malayno inaad dhigtay sharad gudaha ah. Sidaa darteed, waxaad rajeyneysay inay kubbadu ku soo degto 13. Si kastaba ha noqotee, mar haddii hawlwadeenku ku dhawaaqo natiijada kama dambaysta ah, wuxuu kuugu dhawaajiyey sidii iyagoo ku dhawaaqaya lambarka 10. Inkasta oo 10 ay aad isugu dhowdahay, kuma filna inaad dhaafto mustard. Taabadalkeed, waxaad ku khasaartay sharadka. Haddii aad dhigeysay sharad bannaanka ah, markaa sheekadu way ka duwanaan laheyd. Midkoodna, waad guuleysan doontaa illaa inta kubaddu ka degayso meel ka baxsan cidhiidhiga aad qeexday.
Sida loo ciyaaro roulette?
Ilaa inta ciyaarta la ciyaarayo, intaas oo dhami maahan wax adag. Markaad waqti yar ku qaadatay barashada aasaasiga, waxaad toos ugu diyaar noqon doontaa miiska adigoo kalsooni ku qaba daaqsinta inta lagu jiro xilliga iskuulka. Sure, taasi waxay noqon kartaa mid khafiif ah. Si kastaba ha noqotee, qof kasta oo kale oo miiska jooga, waxa kaliya ee ay arki doonaan waa jawi kalsooni shucaac leh. Taasi waxay tiri, ciyaar fursad, kalsoonidu had iyo jeer kuma filna inaad ku baxdo sidii guuleyste.
Xeerarka Casino ee ciyaarta ​​u>
Si aad u dhigto khamaarista gudaha:
Khamaarista gudaha waxaa laga yaabaa inay yihiin kuwa ugu caansan marka laga hadlayo roulette. Aynu nidhaahno waxaad jeceshahay inaad ku guuleysato xoogaa lacag ah, adigoo u maleynaya inay kubbadu ku dhacayaan 14 si sax ah. Kadib, waxaad dhigaysaa jajabkaaga miiska gudaha barta ugu habboon. Ilaa iyo inta ay kubaddu ka degayso meeshii aad saadaalisay, waad ku guuleysan doontaa qaddar u dhigma qaddarka sharadka bilowga ah.
Si loo dhigo meel ka baxsan sharadka:
Guud ahaan, haddii aad dhigto mid ka mid ah kuwan, fursadahaaga guuleysiga ayaa ka weynaan doona. Si kastaba ha noqotee, natiijada, waxaad sidoo kale heli doontaa wax yar haddii aad guuleysato. Sidaa darteed, khamaarista dibedda waxay u muuqdaan kuwo loo maleynayo inay yihiin nooc caymis. Haddii aad haysatay xoogaa gacmo qallafsan, waxaad dib u soo ceshan kartaa inta badan khasaarahaaga iyadoo si fiican loo dhejiyay sharad bannaanka.
Mushahar bixintaadu waxay kuxirantahay qamaarkaaga sharadka:
Sharad kasta, curaarta waxaa xisaabin doona hawlwadeenka sida ay ugu badan tahay inay iyagu guuleystaan. Maaddaama qaddarradu sii kordhayaan, guuleysigaagu wuu yaraan doonaa. Sidaa darteed, sida ay u badan tahay ciyaarta ayaa ah, wax yar oo ay bixin doonto.
Caadi ahaan, waxaa jiri doona ugu yaraan iyo ugu badnaan:
Waqtiga intiisa badan, gudaha casino, waxaa lagugu qasbi doonaa inaad dhigto Khamaaristaada xadka u dhexeeya. Badanaa, waa inaad ka dhigtaa meel ka sareysa sharadka ugu yar halka sidoo kale aad ka hooseyso inta ugu badan. Haddii kale, taasi waa laga diidi lahaa miiska. Xitaa haddii ay ahaan lahayd guuleyste, ma heli doontid wax ka mid ah dakhligaaga. Marka, waa muhiim inaad barato waxa xadidan ay yihiin kahor intaadan falin ficilka.
Khamaarisyada waa la dhigi karaa ilaa ganacsaduhu sidaas ka yiraahdo:
Si ka duwan ciyaaraha kale, sharadada ayaa la sii wadi karaa in la dhigo xitaa marka kubbadu socoto. Dabcan, meel cayiman, ganacsaduhu wuxuu dadka ka horjoogsan doonaa inay dhigto sharad dheeraad ah. Sharad la dhigo bartaas ka dib waa la diidi doonaa si kooban.
Ka dib marka hoyga la dul dhigo miiska, qof walba waa inuu gacmaha isqabsadaa:
Si loo muujiyo waqtiga marka sharadku xiran yihiin, ganacsaduhu wuxuu miiska dul dhigi doonaa doollar. Inta badan, waxay umuuqan doontaa puck yar oo casaan ah, oo lamid ah kuwa loo isticmaalo ciyaaraha xeegada. Ka dib markaad aragto ganacsadaha oo miiska saaran, qof walba waa inuu talaabo dib uqaadaa oo uu sugaa natiijooyinka.
Khamaarista lumay dhinac ayaa loo xaaqay:
Ka dib meelaynta dolly, ganacsatada waxay qiimeeyaan boosaska miiska la saaray. Dhammaan inta lumay, jibbaarada waxaa lagu xaaqay guryaha dhexdooda. Lagu lumiyay casino, jajabyadaas ayaa ufiican sidii hore. Si kastaba ha noqotee, xitaa ka dib marka ganacsaduhu sameeyo ficilkan, xoogaa yar oo jajab ah ayaa weli ku sii jiri doona miiska. Kuwani waa jajabyada dadka ku guuleystay.
Ugu dambeyntii, ganacsadaha ayaa u dhiibaya lacag bixinta guuleystayaasha:
Mid kasta oo ka mid ah guuleystayaasha, dakhligooda waxaa loo xisaabin doonaa iyadoo loo eegayo qatarta wicitaanada ay sameeyeen. Maaddaama khilaafaadka ay sii kordhayaan weligood aan macquul ahayn, dakhligaagu wuxuu si aad ah ugu boodayaa waraaqaha. Marka wax walba la xisaabiyo, ganacsaduhu wuxuu miiska ka nadiifin doonaa isagoo qof walba u dhiibaya guuleysigiisa. Kadib, mashiinka oo dhan wuxuu dib ugulaabanayaa sagxadda kow.
Maxay yihiin jaantusyada istiraatiijiyadda roulette?
Dhinaca kale, ciyaarida kulankaan oo kale waxay noqon kartaa waxqabad yara fudud. Dhinaca kale, adiga oo leh maskax ka duwan, waxaad u arki kartaa tan inay tahay meel aad kaga soo bixi karto lacagta. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka fikirto naftaada wax badan oo ka mid ah kan dambe, markaa xeeladaha soo socda waa inay kugu filnaadaan.
Laga yaabee, istiraatiijiyadani inay tahay tan ugu caansan. Si kastaba ha noqotee, erey taxaddar leh, waxaan dhihi doonnaa waxaad ku dambeyn kartaa qoto dheer casaanka kahor intaanay shaqeyn. Istaraatiijiyaddan, waxaad si joogto ah u dhigeysaa isla sharadka. Haddii ay lumiso, waxaad dhigeysaa isla sharadka. Si kastaba ha noqotee, lumis kasta, cabbirka sharadku waa inuu labalaabaa qiimaha. Ugu dambeyntii, waad jebin doontaa xitaa. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u guuleysato, waad soo celin doontaa wax kasta oo aad lumisay ilaa heerkaas oo lagu daray waxyaabo intaa ka sii badan.
Khamaarista dibedda waxay u muuqdaan kuwo muxaafid ah. Maaddaama ay keenaan guul marar badan, waxaan doorbidnaa inaan u isticmaalno sida deyr. Marka jeebabkaagu ay dareemayaan dhuuban, dhigista khamaarista banaanka waxay ku siin kartaa natiijooyin wanaagsan. Markaad dib u buuxiso kaydkaaga, waxaad bilaabi kartaa inaad ka baxdo habab khatar badan.
Isticmaalka khamaarista istiraatiijiyadeed ee khamaarka gudaha:
Khamaarka gudaha oo dhan ma wada laha qiimeyn isku mid ah. Sidaa darteed, haddii aad hesho kuwa leh lacagaha ugu badan, waxaad kasban kartaa wax badan inta aad dhigeyso sharad yar. In kasta oo ay waxyar garaacaan, xitaa hal guul ayaa ku siin karta soo laabasho la yaab leh.
Waa maxay caqabadaha ?:
Ciyaar kasta, hubi in waxyaabaha la isku fahmayo la fahmayo ka hor intaan la sameyn. Haddii kale, waxaad u duulaysaa indhoole indha indheyn oo ku qulqulaya mareexaan kugu adkaan kara. Saameyn ahaan, adoo isku hubeeya aqoonta, waligaa ma waayi doontid wadadaada sida aad u socoto.
Tilmaamaha Roulette ee bilowga
Nasiib wanaag, bilowga, roulette wuxuu ka mid yahay cayaaraha ugu fudud ee lagu ciyaaro naadiga ama online casino . Xitaa kuwa aan wax ka maqal ciyaarta waxay u arki doonaan inay tahay mid toos u toosan.
Ku billow inaad dhawr jeer wareegto adigoon ka qaybgalin:
Haddii aad tahay qof cusub oo dhameystiran, markaa waxaan kugula talin lahayn inaad sugto ilaa aad ciyaarta ka aragto kahor intaadan lacag dul dhigin khadka. Haddii kale, fursaduhu way fiican yihiin in lacagtaas la waayo kahor intaadan ogaanin. Adoo daawanaya wareegyo yar, waxaad ugu yaraan yeelan doontaa fikrad hufan oo ku saabsan waxa aad naftaada gelineyso.
Intaas ka dib, dhig wax yar oo khamaar yar si kastaba ha noqotee waxaad jeclaan lahayd inaad dareento waxyaabaha:
Ka dib markaad heshay aasaaska aasaasiga ah, waa waqtigii lagu dhejin lahaa sharadyadaada ugu horreeya. Sidaas oo ay tahay, waxaa muhiim noo ah inaannaan ka hor marin nafteenna. Ugudambeyn, riyada macaashka baaxadda weyn ayaa inta badan horseeda musiibo dhaqaale Adoo gelinaya sharad yar marka hore, waxaad yareyn doontaa qasaarahaaga inta ugu macquulsan. Habkaas, xitaa markaad lumiso, ma dareemi doontid sidii adduunku u burburayo.
Markaa, isticmaal mid ka mid ah istiraatiijiyadeena kor ku xusan si aad ugu bilowdo khamaariste xeeladaysan:
Mar alla markii aad dhigatid khamaarkaaga ugu horreeya, ma dhaawaceyso inaad bilowdo inaad ka fikirto istiraatiijiyad. Dabcan, wareegyada ugu horreeya, waxaad diirada saartaa waxyaabaha xiisaha leh. Si kastaba ha noqotee, ka dib markaad kobciso cagahaaga, waa waqtigii aad wax ku xallin lahayd qalab kale. Markaad sidaas sameysid, waxaad hubin doontaa inuu habeenkii ku dhammaado si faa’iido leh.
Dabcan, mahadsanid tiknoolajiyada internetka, waxaa jira noocyo badan oo ciyaartan ka badan abid taariikhda. Maalmahan, habka aad u ciyaarto waa gebi ahaanba xulasho shaqsiyeed. Sidaa darteed, waxaa ugu fiicnaan laheyd inaad baratid dhowr ka mid ah qaababka ugu caansan ee ciyaarta la qaato. Hoosta, waxaan ku soo koobnay dhowr ka mid ah kuwa aan ugu jecel nahay.
Iskusoo wada duuboo, waxaan jecel nahay markaan la ciyaari karno dadka kale inta aan guriga joogno. Kaliya maahan mid aad ugu habboon, laakiin waxaan weli helnaa faa’iidada isdhexgalka bulshada. Markaa, nuqulka cusub ee ciyaarta ayaa noqday mid burbursan, ugu yaraan heerarkeenna. Noocaani, waxaad kuheli doontaa shaqsiyaad kale oo adduunka ah. Qof kastaa wuxuu ku shiraa jawi muuqaal ah. Deegaanka wuxuu la mid yahay casino dhab ah, oo aan lahayn buuq badan.
Marka xigta, roulette hillaaca ayaa si isa soo taraysa caan ugu noqday dadka da ‘yarta ah. Waad ku mahadsan tahay sida ugu dhakhsaha badan ee waxqabadkeeda, waxay u egtahay inay sii hayso dadka leh feejignaan gaaban oo inbadan ku hawlan. Dheeraad ah, tani waa ikhtiyaar kale oo aad heli karto oo aad kaga ciyaari karto raaxada gurigaaga. Markaad kuxirto shabakadahooda internetka, waxaad marin uheli doontaa khibrada oo dhan.
Shaagaggan, waxaa jira eber dheeri ah oo lagu dhejiyo looxa. Dhamaadka, waxay siineysaa guriga xoogaa xoojin ah oo ay kuxirantahay. Farqiga kale ee noocyada kale wuxuu noqon karaa sida dadku u maareeyaan guntooda. Qaabka Mareykanka, qof kastaa wuxuu leeyahay midab isaga u gaar ah marka uu miiska saaro.
Kala duwanaanshahan, waxaad ku dhejin kartaa sharad lambar kasta oo u dhexeeya 1 iyo 36. Noocooda guddiga, waxaad ka heli doontaa keliya eber. Waqtiga intiisa badan macnaheedu waa inaad waxoogaa ka fiicnaan doontaa guriga marka loo eego noocyada kale ee ciyaarta.
Waxaa laga yaabaa, ka soo bixitaanka Faransiiska ee ciyaarta inuu noqon doono kan ugu da’da weyn dhammaantood. Xaqiiqdii, taariikhyahannada casino waxay tixgelinayaan nuqulkan inuu yahay kii asalka ahaa. Marka loo barbardhigo noocyada kale, ciyaartoydu waxay leeyihiin xulashooyin yar marka ay dhigayaan sharadooda.
Xeeladaha sharadka Roulette
Xeelado noocee ah ayaad jeceshahay inaad adeegsato intaad hor taagan tahay miiska sharadka? Maaddaama rooti inta badan ay tahay ciyaar nasiib, waxay umuuqan doontaa inay jiraan fursado dhowr ah oo ciyaartoydu u adeegsadaan inay ku horumariyaan qaddiyaddooda. In kasta oo xulashooyinku aad u kooban yihiin, haddana way ka fog yihiin wax-qabad la’aan. Adoo si istaraatiijiyad ah u fulinaya iyaga, aad ayaad uga fiicnaan doontaa mustaqbalka fog.
Istaraatijiyadaha Martingale ee ka soo horjeedka Martingale:
Habka Martingale ayaa si qoto dheer horaantii loogu sharaxay maqaalka. Si kastaba ha noqotee, weligeen kama xusin dhiggiisa dhow, Martingale Reverse. Istaraatiijiyaddan, waxaad ku bilaabi doontaa habeenka adigoo dhigaya sharad yar. Khasaara kasta ka dib, waxaad kordhin doontaa sharadka cabbirka adoo waliba ku dhejinaya sharadka ikhtiyaar ka duwan. Waxay umuuqataa inay tahay farqi yar. Hase yeeshe, dad badan, waxay habeenka uga beddelaysaa mid ba’an oo cabsi leh.
Habka joogtada ah ee joogtada ah:
Qunsuliyadda inta badan waa astaamo la qiimeeyay oo ku jirta adduunka casriga ah. Iyada oo wax walboo hareerahayaga ah ay isbedelayaan marwalba, way fududahay in la aamino in aysan waxba sii joogi doonin. Iyadoo aan loo eegin dibedda, markaad tahay miiska miiska, go’aannadaadu waa waxa ugu muhiimsan. Adoo qorshaynaya qorshahaaga kahor imaatinka, waxaa jira waxyaabo yar oo kadis ah oo kaa hor istaagi kara safarkaaga. Waxaa intaa sii dheer, qaabkan, waxaad ku ogaan doontaa sida saxda ah sharad la isticmaali doono marka ay ku soo dhacdo saxankaaga.
Sidee loogu guuleystaa roulette?
Marka loo barbardhigo cayaaraha kale, ku guuleysiga roulette waxaa loo arki karaa waxqabad kooxeed. Waad ku mahadsan tahay dhammaan ciyaartoydu inay isku dhinac yihiin, qof kastaa wuxuu u midoobaa guriga si uu u kiciyo khamaarka. Xaqiiqdii, bayaanka hore wuxuu ahaa wax yar oo hyperbolic ah. Weli, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad sharaxdo isbarbardhig ka wanaagsan miiska roulette.
Dhigista sharad ka dib markii ay kubbadu dhacday:
Hagaag, aragti aad u daran, waxaan aaminsanahay inay tani ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee soogalootiga cusub ay ogaadaan. Uma baahnid inaad dhigatid khamaarkaaga bilowga ciyaarta. Xaqiiqdii, adoo sugaya illaa daqiiqada ugu dambeysa, waxaad fikrad fiican ka heli doontaa halka ay kubaddu ku dhici karto dhamaadka.
Falanqaynta xawaaraha xagalka ah ee maaddada:
Wakhtiga aad sugeysidba, xawaaraha badan ee ay kubaddu luminayso. Maaddaama ay noo fududahay inaan odoroso halka ay ku dambayn doonto haddii ay gaabis tahay, wax yar oo aan sugno waxay noqon kartaa fikrad weyn. Habkaas, marka aad dhigto sharadka, waxaad kubad u maleyn kartaa mustaqbalka xoogaa si sax ah.
Maxaad u baratay sida loo maareeyo khatarta:
Ma aha in la sheego, oo leh meeleyn sax ah oo sax ah, waxaad sidoo kale ku ciyaari kartaa nidaamka adoo adeegsanaya ciyaaro ka baxsan. Maaddaama ay kuwaa xitaa horay u sii fiicnaadeen, waxaad ku kordhin doontaa fursaddaada adoo adeegsanaya habkan. Sidaa darteed, adoo raacaya talaabooyinka si taxaddar leh, waxaad ku baran doontaa farshaxanka roulette daqiiqado gudahood.
Jeebka gunta hoose ayaa u dhigma macaash aan dhammaad lahayn:
Xaqiiqdii, habka ugu wax ku oolka badan ee lagu hubiyo in macaashkaagu noqdo xeeladda Martingale. Si kastaba ha noqotee, qof kastaa ma awoodi karo inuu parlay wareegyadaas badan. Waxaa intaa dheer, mahadsanid xadka ugu sareeya ee bet, qaar ka mid ah casinos waxay si wax ku ool ah jilbaha uga jaraan nidaamka bilowga.
Ha u ogolaan naftaada inaad ku nuugto Martingale kordhin marka miiska uu leeyahay xadka ugu badan ee sharad la dhigo. Haddii kale, waxaa lagugu qasbi doonaa inaad aqbasho khasaaraha markii cabbirka sharadkaagu ka sarreeyo kan ugu badan.
Halkaa marka ay marayso, mar dambe suurtagal maahan inaad sii wadato adeegsiga nidaamka Martingale. Taa bedelkeeda, waxaad waayi doontaa tan lacag ah oo aad ku raadinayso yoolka ugu dambeeya ee aan miro dhal lahayn.
Tilmaamaha Roulette iyo tabaha
Tilmaamaha iyo tabaha waxay ku fiican yihiin inay kaa caawiyaan inaad sare u qaado faa’iidadaada markay muhiim tahay. Haddii kale, maxay fiicnaan lahaayeen? Sababtaas awgeed, waxaannu soo ururinnay xoogaa nugugyo talo-bixinno la yaab leh oo talo ah oo dhegaheennu weligoodba maqleen. Markaad jaleecdo iyaga, waxaad diyaar u noqon doontaa inaad ku soo bandhigto xirfado cusub hal-abuurnimo casino aad booqato.
Raadi istaraatijiyad adiga kuu shaqeysa:
Iskusoo wada duuboo, inaad dareento raaxo istiraatiijiyad aad isticmaasho ayaa ugu muhiimsan. Ilaa aad ku raaxeysato inaad ku dhegan tahay habeenka oo dhan, waxay kaa sii badin kartaa inay waxyeello kuu geysato iyada oo ka sii fiicnaan doonta fursadahaaga guusha. Ilaa aad ka heshid wax ku soo noqnoqda, sii wad tijaabinta habab kala duwan. Qof walba ma jecla inuu u ciyaaro ciyaarta si isku mid ah. Si kastaba ha noqotee, khadadkaas isla, maaha sida haddii hal istiraatiijiyad oo keliya ay wax ku ool tahay sidoo kale. Xaqiiqdii, waad ogaan kartaa istiraatiijiyad gebi ahaanba cusub oo leh saameyn ka weyn xitaa mid ka mid ah istiraatiijiyadeena waligood soo maray.
Maxaad dhihi lahayd ayaa go’aamiya guusha dadka in ka badan wax kasta oo kale? Aragtidayada, waxna laguma tilmaami karo inay ka saameyn badan yihiin marka laga reebo u heellan shaqsiyadeed ujeedadooda. Markaad dhahdo waad fulin doontaa wax, waa inay macnaheedu tahay inaad sameyn doonto wax kasta oo ay kugu qaadato inaad ku gaarto hadafkaas. Guud ahaan marka laga hadlayo, dadku taas macnaheedu maahan marka ay waxaas oo kale sheegaan. Taabadalkeed, sida ugu dhakhsaha badan caqabada ugu yar ee hortaagan dariiqa ay marayaan, iyagu waa kuwa ugu horeeya ee damiinta markabka. Halkaa marka ay marayso, wax lala yaabo ma aha sababta ay ula halgamayaan waxyaabo badan oo nolosha ah? Xitaa haddii ay ku taagnaan lahaayeen dariiqa saxda ah, way ku adkaan lahaayeen inay ogaadaan ka hor intaysan ka tegin mabaadi’dooda.